मध्यबिन्दु अनलाइनसुशासनका पक्षमा हाम्रो ख़बरदारी | नेपाल ट्रष्टको कम्प्लेक्समा तस्करको लगानी
नेपाल ट्रष्टको कम्प्लेक्समा तस्करको लगानी
काठमाडौं – नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वमा रहेको नारायणहिटी दरबार अगाडिको १ रोपनी १४ आना जग्गा यती समूहअन्तर्गतको थामसेर्कु प्रालिले ३० बर्षका लागि लिजमा लिएको हो । उक्त जग्गामा भव्य ब्यापारिक कम्प्लेक्स निर्माण भइसकेको छ । उक्त कम्प्लेक्स निर्माण थामसेर्कुले नगरी अवैध हुन्डीको कारोबार गर्ने गोविन्द सरिया, ताहिर शाह र बच्चु पौडेललाई दिएको खुलेको हो । थमसेर्कुले जग्गा लिजमा लिएर कम्प्लेक्स बनाउन सरिया, शाह र पौडेललाई दिएको स्रोत बताउँछ । थामसेर्कुका प्रभावशाली संचालक आङछिरिङ शेर्पाको निधनपछि उनका दाजु लाक्पासोनाम शेर्पाले उक्त कम्प्लेक्स निर्माणको जिम्मा सरियाहरुलाई दिएका हुन् । पौडेलमार्फत् उक्त कम्प्लेक्स निर्माणमा विष्णु खत्रीले पनि लगानी गरेका छन् । कम्प्लेक्सको केही भाग थामसेर्कुले प्रयोग गर्न पाउनेछ । अरु सबै सरिया र पौडेलको समूहले उपयोग गर्नेगरी निर्माण गरिएको बुझिएको छ ।
बच्चु पौडेल तातोपानी नाका सुचारु हुँदा त्यहाँबाट रक्तचन्दनदेखि सुन तस्करी गर्थे । पछिल्लो समयमा उनी गोविन्द सरियासँग मिलेर हुन्डीको कारोबारमा रहेको स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार न्यूरोडमा रहेको अनिता लामा अध्यक्ष र पौडेल कोषाध्यक्ष रहेको जयरत्न बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामार्फत् हुन्डीको कारोबार हुने गरेको छ । गोविन्द सरिया नेपालमा हुन्डी कारोबारका बादशाह हुन् । उनको नेपाल प्रहरीका उच्चपदस्थहरुसँग कनेक्सन भएकाले उनको कारोबार निर्वाध हुँदैआएको छ । अपराध महाशाखा र काठमाडौं परिसरले सानातिना हुन्डी कारोबारीलाई पक्राउ गरेर काम देखाए पनि सरियालाई छुन समेत सक्दैनन् । नेपाल प्रहरीका पूर्व आइजीपी उपेन्द्रकान्त अर्याल, एआइजी विज्ञानराज शर्मा, देवेन्द्र सुवेदीको पैसा समेत उनले मिटरब्याजमा चलाउने गरेका थिए । ११ बर्षअघि हिमाल अस्पतालअगाडिबाट उनको ५७ लाख रुपैयाँ लुटियो, तर उनले प्रहरीमा जाहेरी दिएनन् । हुन्डीको रकम भएकाले स्रोत खुलाउन नसक्ने भएपछि उनले जाहेरी नै दिएका थिएनन् । तिनै सरिया र पौडेल मिलेर सहकारीमार्फत् हुन्डीको कारोबार गर्दै आएका छन् । अपराध अनुसन्धान महाशाखा र काठमाडौं परिसरका प्रहरीलाई थाहा भए पनि लाभ लिएर उनीहरुको हुन्डी कारोबारमा दख्खल नदिई संरक्षण गर्दैआएका छन् ।
बच्चु पौडेल जुन पार्टी सत्तामा आयो, सोही पार्टीको समर्थक हुने गरेका छन् । पछिल्लो समयमा उनी नेकपा निकट भएका छन् । नेपाली कांग्रेस सत्तामा हुँदा विष्णु खत्रीसँग साझेदारीमा ब्यापार गर्दैआएका पौडेलले अहिले उनलाई नेपाल ट्रष्टको जग्गामा निर्मित कम्प्लेक्समा पनि लगानी गर्न लगाएका छन् । आफू भने नेकपाको कार्यकर्ताका रुपमा नेताका घर घर धाउने गरेका छन् । नेकपा निकट अनेरास्ववियुको राजनीति गरेकी अनिता लामालाई उनले सहकारीको अध्यक्ष बनाएका छन् । बानेश्वरमा सञ्चालित एक रेष्टुरेन्टमा पनि उनले लगानी गरेका छन् । जुन रेष्टुरेन्टमा अनेरास्ववियुका केही नेतृसमेत जोडिएका छन् ।
नेपाल ट्रष्टले नारायणहिटी अगाडिको उक्त जग्गा कौडीको मूल्यमा थामसेर्कुलाई ३० बर्षका लागि लिजमा दिएको थियो । महालेखा परीक्षकको ५५ औं प्रतिवेदनले यो जग्गा लिज दिंदा कानून मिचिएको र नेपाल सरकारलाई करीब रु. ५ अर्ब नोक्सानीमा पारिएको उल्लेख गरेको छ ।
ट्रष्टका एक सचिव नेतृत्वको आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकन समितिले रु. ६ अर्ब ४५ करोड ६६ लाखमा उक्त जग्गा भाडामा दिन दिएको सुझाव विपरीत थामसेर्कुलाई रु.१ अर्ब ५९ करोड ४० लाखमा २०७४ जेठमा भाडामा दिइएको थियो । जुन बेला नेपाल ट्रष्टका सचिव अर्जुनकुमार कार्की थिए । उनले नै उक्त जग्गा कौडीको मूल्यमा थामसेर्कुलाई दिएका थिए । तर अख्तियारदेखि सबै निकायले यस्तो नांगो अनियमिततामा पनि छानबिन गरेका छैनन् ।
स्रोत : दृष्टि साप्ताहिक
चौतारी र आरम्भ लघुवित्तलाई गाभिन स्वीकृति
सेरामिक उद्योगले नेपालमै टायल उत्पादन गर्दै
आइतवार, असार ७, २०७७
पूर्व कप्तान पारस अग्नी ग्रुपको ब्राण्ड एम्बासडर
‘अन्नपुर्ण एक्सप्रेस म्युजिक फेस्ट–२’ हुँदै
बुधबार, माघ २२, २०७६
मेगा बैंककी सिइओ खुञ्जेली ‘बेष्ट वुमन म्यानेजर अफ दि इयर’
चेम्बर अफ कमर्श र भाइब्रेण्ट गोवा फाउण्डेशनबीच सहमति
निजी क्षेत्रको समेत लेखा पारदर्शी छैन : शिक्षामन्त्री पोखरेल
बहु प्रतिक्षित होण्डाको सि बि ३५० डिलक्स अब नेपाली बजारमा